သင်၏အားလပ်ရက်စျေးဝယ်ခြင်းအရောင်းမြှင့်တင်ရန်နည်းဗျူဟာ ၇ Martech Zone
ကျနော်တို့အစောပိုင်းကယနေ့သတင်းအချက်အလက်တစ်တန်ပေးခဲ့သည် အားလပ်ရက်အရောင်းနှင့်ဆက်စပ်ရက်စွဲများ, ဟောကိန်းများနှင့်စာရင်းဇယားယခုအားလပ်ရက်ရာသီတွင်သင့်အားအွန်လိုင်းစကားဝိုင်းများတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်သင်ဤအားသာချက်များကိုမည်သို့အသုံးချနိုင်သည်ကိုအချက်အလက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုမျှဝေလိုပါသည်။
နောက်တစ်နှစ်ထပ်တိုးမယ်။ အားလပ်ရက်စျေးဝယ်စိတ်ပြင်းထန်ခြင်းစတင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ShortStack စျေးဝယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောစာရင်းအင်းများ (၂၅!) ကိုပြည့်စုံစေပြီးလာမည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းသင်၏ပရိသတ်များနှင့်နောက်လိုက်များနှင့်ပိုမိုဆက်သွယ်နိုင်ရန်အထောက်အကူပြုမည့် Campaigns အတွက်အကြံဥာဏ်အချို့ကိုထည့်သွင်းထားသည်။
ရေကြောင်း၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုသက်သာလိုပါသလား။ ဘယ်လိုလိုချင်တဲ့ဖောက်သည်များအတွက်လျှော့စျေးကိုကမ်းလှမ်းကော? ကောက် သင့်ရဲ့စတိုးဆိုင်မှာသူတို့ဝယ်ယူ?
သင်၏လူမှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်းကိုဆွဲဆောင်သောလူမှုမီဒီယာများမှတဆင့်မြှင့်တင်ရေးကိုကမ်းလှမ်းပါ အီးမေးလ်ကနေတဆင့်မှာယူပါ ဒါကြောင့်သင်ကရာသီတစ်လျှောက်လုံးကမ်းလှမ်းမှုကိုတွန်းနိုင်ပါတယ်။
အခုသင့်မှာအဲဒီအီးမေးလ်တွေရှိနေပြီ၊ တစ်ရက်ကမ်းလှမ်းပါ အားလပ်ရက်ရာသီတစ်လျှောက်လုံး။
အခွင့်ကောင်းယူသည် ပန်းချီဆရာ ၀ ယ်ယူမှုကိုသင်၏စတိုးဆိုင်အတွင်းသိမ်းထားရန်အတွက်မိုဘိုင်းတစ်ခုတည်းသောကမ်းလှမ်းမှုကိုပေးပါ။
မိုဘိုင်းအကြောင်းပြောရရင်၊ မိုဘိုင်း - အဆင်သင့်ကူပွန်။ စာသားကလပ်များသည်သင်၏ဖောက်သည်များအားအထူးလျှော့စျေးများကိုတွန်းအားပေးရန်၊ အားလပ်ရက်များတစ်လျှောက်ကူပွန်အချို့ကိုကမ်းလှမ်းရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
စျေးဝယ်ရာသီ၏အားသာချက်ကိုယူ။ ရေရှည်စတင်ပါ တင်ရေး သင်၏အီးမေးလ်သုံးစွဲသူများအတွက်သူတို့သည်သင်ပေးပို့သောကမ်းလှမ်းမှုရှိသည့်အီးမေးလ်တွင်စာရင်းသွင်းခြင်းနှင့်တက်ကြွစွာရှိနေခြင်းတို့ဖြစ်သည်။